आखिर के भइरहेको छ गायिका टिका सानुलाई आजभोली ? – Gazabkonews
आखिर के भइरहेको छ गायिका टिका सानुलाई आजभोली ?
गुरु शिष्य दुवैले विगतका दिन सम्झिएर निकै बेरसम्म पनि रोए । उनीहरु रुँदा उनीहरुलाई देख्ने सबैको आँखा पनि रसाएको थियो । टिक तब निकै भावुक बनिन् जब उनले आफ्नो गुरु खेमको ऋण आफुले सोंचेभन्दा निकै नै बढी भएको थाहा पाईन् । उनले यो कुरा थाहा पाएपछि गुरुले आफुलाई पहिला नै भनेको भए सबै ऋण तिर्न नसकेपनि ब्याज भएपनि तिरेर ऋण कम गर्न त सकिन्थ्यो भन्दै भावुक बनिन् । उनै गुरु चेलीको मार्मिक कुराकानी सुन्नलाई यो भिडियो क्लिक गर्नुहोला । भिडियोसहित